Venerable Kusalasami: May 2014
Posted by ashin kusalasami at 12:20 PM No comments:
Posted by lwin at 4:04 PM No comments:
Posted by ashin kusalasami at 10:34 AM No comments:
အရှင်ဘုရား … အရှင်ဘုရားကို အချို့လူတွေ ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော် မခံနိုင်ဘူး၊ တစ်ခုခု ပြန်ပြောပါဦး။
ဟေ … ဟုတ်လား။ သူတို့တွေက အချိန်တွေ ပိုပြီး လုပ်စရာ မရှိလို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ ။
Posted by ashin kusalasami at 10:29 AM No comments:
ဖားလား ငါးလား ...
တစ်နေ့က ပုံမှန်လာရောက်ပြီး တရားအားထုတ်၊ တရားနာလေ့ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဒကာမကြီးနဲ့ တရားထိုင်နေစဉ် နာရီပြည့်ခါနီးမှာ နောက်က လူတစ်ယောက်ဝင်လာသံ၊ ဖိနပ်ချွတ်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။ သူစိမ်းလား၊ ဘယ်သူလဲ ဘယ်ဝါလဲဟု စိတ်က တွေးဖြစ်သွားတယ်။ တရားအာရုံလွတ်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ ငြိမ်သွားတယ်။ သိလိုစိတ်က ပိုပြင်းပြလာတယ်။ ပြီးတော့ အသက်ကို မှန်မှန်ရှူရှိုက်သံ ကြားလာရတယ်။ အော် သူလည်း တရားလာထိုင်တာ ဖြစ်မှာပါလို့ တွေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှ တရားကို ပြန်အာရုံပြုဖြစ်တယ်။
၁ဝ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ နာရီအချက်ပေးသံနဲ့အတူ တရားဖြုတ်လိုက်တယ်။ တရားဖြုတ်ပြီးတာနဲ့ နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဖိနပ်စင်လေးဘေးမှာ လူတစ်ယောက်တရားမှတ်နေလေရဲ့။ ကိုယ့်လည်း မြင်ရော သွားမယ်ဆိုပြီး လက်ကာပြတယ်။ နေပါအုံး၊ နေပါအုံး မိတ်ဆက်ပါအုံး၊ ဒီနား လာထိုင်ပါအုံးဆိုတော့ အိန္ဒိယဒကာမကြီးက မခေါ်နဲ့ ဘန္တေ တဲ့။ အော် ခေါ်ရမှာပေါ့၊ တရားလာအားထုတ်တဲ့သူကိုလို့ ဆိုတော့ အနားကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတယ်။ အရက်သမား၊ ဆေးသမားကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့။ သူ ဘာပဲဖြစ်နေနေ၊ ဦးဇင်းကတော့ သူနဲ့ စကားပြောကြည့်ချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ကို တရားထိုင်တဲ့ ဆိုဖာလေး ယူခိုင်းပြီး ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
သူက အသက် ၅ဝ ကျော်ပြီတဲ့။ ဆေးစွဲနေပါတယ်။ မိန်းမတွေ၊ သားသမီးတွေနဲ့လည်း ဝေးသွားပါပြီတဲ့။ ပြောရင်းနဲ့ မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်။ သူ့လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ မျက်ရည်တွေ သုတ်နေတယ်။ မိမိက တစ်ရှူးတစ်ခုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ သူ ဆေးဖြတ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုမှ ဖြတ်မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မင်း ဖြတ်ပေးနိုင်မလားတဲ့ သူက မေးတယ်။ ငါတော့ ဖြတ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဟောမှာ တွေ့လား၊ ထိုင်နေတဲ့သူ ဗုဒ္ဓလို့ ခေါ်တယ်။ သူ ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားသွားသလား မသိဘူး။ ဘုရားဆင်းတုကို အသေအချာကြည့်နေတယ်။ အိုး တကယ်လား၊ သူက ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ မယုံသင်္ကာမျက်လုံးနဲ့ ပြောနေတယ်။
မင်းကသာ သူပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ရင် သူ ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူက ရယ်စရာပြောတယ်လို့ ထင်နေပုံရတယ်။ သူက စကားမှ မပြောတတ်တာတဲ့။ ဟောဒီမှာ ကြည့်၊ (ပဋ္ဌာန်းအကျယ်စာအုပ်ထူကြီးကို ကိုင်လျက်) ဒါ သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေပဲ၊ ဒါမျိုးစာအုပ်က ၄၂ အုပ်တောင် ရှိတယ်လို့၊ အဲဒီလောက်တောင် ပြောခဲ့တာလို့၊ အဲဒီစကားတွေကို ငါက မင်းကို ပြန်ပြောမှာလို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူက စကားတွေ အများကြီး လျှောက်ပြောနေတော့ (ရစ်နေတော့) စကားအများကြီး မပြောပါနဲ့။ သူက(ဗုဒ္ဓက) စကားအများကြီး ပြောတာ မကြိုက်ဘူး၊ အလုပ်အများကြီး လုပ်တာပဲ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောတော့ သူက ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ မေးတယ်။
ဆေးသမားတော့ နည်းနည်းများ ငြိမ်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကဲ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်ပါ၊ ဘယ်လက်ဖဝါးပေါ် ညာလက်ဖဝါးကို တင်ပါ၊ ခါးကို မတ်မတ်ထားပါ၊ မျက်စိကို မှိတ်ထားပါ၊ စိတ်ကို လျှော့ချလိုက်ပါ၊ ခေါင်း ဆံစကနေ ခြေဖျားအထိ ဖြည်းဖြည်းချင်း အာရုံပြုကြည့်ပါ၊ အကြောတွေအားလုံးကို လျှော့ချထားပါ၊ စိတ်ထဲကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဘယ်နေရာက တင်းနေသေးလဲ၊ တစ်ကိုယ်လုံး သက်တောင့်သက်သာအနေအထားဖြစ်တဲ့အထိ လျှော့ချပါ၊ ကျေနပ်ပြီဆိုတာနဲ့ မင်း မျက်လုံးတွေကို ခဏဖွင့်ပြီး ငါ လုပ်တာကို ကြည့်ပေးပါ။
သူ့ရှေ့မှာ အသေအချာထိုင်ပြတယ်။ မင်းရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်ကို မှတ်မယ်။ သတိပြုမယ်။ ထွက်လေထွက်တဲ့အခါ လေလေးက ဒီနေရာကို ထိသွားတယ်။ နှာသီးဖျားကို လက်ထောက်ပြီး ပြတယ်။ ဝင်လေဝင်သွားတဲ့အခါလည်းပဲ လေက ဒီနေရာကို ထိသွားတယ်။ မင်း ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုဘူး။ မင်း လုပ်ရမှာက အဲဒီ လေထိသွားတာလေးကို သတိပြုနေဖို့ပဲ။ ဒီနေ့ အစဆုံးနေ့ဆိုတော့ မိနစ် ၃ဝ နဲ့ စမယ်။ မင်း အတတ်နိုင်ဆုံး လုံးဝ မလှုပ်ပါနဲ့။ လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သတိလေးထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး လှုပ်ပါ …. စသဖြင့် တရားထိုင်နည်းအကျဉ်း ပြောပြလိုက်တယ်။ နာရီအချက်ပေးစက်ကို မိနစ် ၃ဝ ပေးပြီး တရားစထိုင်လိုက်တယ်။
မိနစ် ၃ဝ ပြည့်သွားတယ်။ အိန္ဒိယဒကာမကြီးကော မိမိပါ အံ့သြသွားတယ်။ သူက မိနစ် ၃ဝ ပြည့်တဲ့အထိ တရားထိုင်နိုင်ခဲ့တာကိုပေါ့။ ပြီးတော့ အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိလဲလို့ မေးတော့ ကောင်းတယ်တဲ့။ ဆေးသုံးထားတဲ့အချိန်တွေ လာလို့ ရလားတဲ့။ အချိန်မရွေးလာခဲ့ပါ။ လာရင်တော့ တရားထိုင်ရမယ်လို့။ သူက ဘာကြောင့်ရယ် မသိ၊ ဆေးကြောင့်လော၊ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိ၊ မျက်ရည်တွေ ထပ်ကျလာနေတယ်။ နောက်လည်း လာပါဦးမယ်တဲ့။ သူ့စိတ်တွေ နည်းနည်းငြိမ်းချမ်းပါတယ်တဲ့။ ငါ ဆေးပြတ်ဖို့ ငါ့ကို စကားလက်ဆောင်နည်းနည်း ပြောပေးနိုင်မလားလို့ မေးပါတယ်။
အမှန်တော့ သူ့ကို စကားအကြာကြီး မပြောချင်ပါ။ သို့သော် မတော်တဆများ ဆေးဖြတ်နိုင်သွားရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ ထိုင်းမှာ ရဟန္တာလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆရာတော်အာဂျန်ချားစာအုပ်ထဲက ဥပမာလေးနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
သတ္တဝါလေးတွေဟာ ထောင်ချောက်မိတယ်ဆိုရင် အသည်းအသန် ရုန်းကန်အော်ဟစ်ရင်း ဆင်းရဲခံစားရတယ်။ သူတို့ဟာ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အားကုန်ထည့်ပြီး ရုန်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုန်းလေလေ ထောင်ချောက်က ပိုတင်းပြီး ဝေဒနာက ပိုခံစားရလေလေပဲ။
မင်း ဆေးစွဲတယ်ဆိုတာလည်း ထောက်ချောက်မိခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ မင်း ဘယ်လောက်ပဲ ရုန်းရုန်း ထွက်လို့ကို မရဘူး။ ထောင်ချောက်မိနေတဲ့ သတ္တဝါလေးတွေ လုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ မုဆိုးလာတာကို စောင့်ပြီး အသေခံဖို့ပဲ။ ငှက်ကလေးတွေ ကြိုးကွင်းထောင်ချောက်မိတာလည်း အတူတူပဲ။ လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းက စွပ်မိနေတော့ ဘယ်လိုပင် ရှေ့တိုးနောက်ငင် ရုန်းရုန်း၊ ပိုပြီးတော့ အထိနာရုံပဲ။
ငါတို့မှာလည်း ထောင်ချောက်တွေ ရှိတယ်။ အမြင်အာရုံထောင်ချောက်၊ အကြားအာရုံထောင်ချောက်၊ အနံ့အာရုံထောင်ချောက်၊ အရသာအာရုံထောင်ချောက်၊ အတွေ့အာရုံထောင်ချောက်တွေ။ မင်း ဆေးစွဲတယ်ဆိုတာ အရသာအာရုံထောင်ချောက်ပဲ။ ဆေးချလိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့ အရသာကနေ အခြားအာရုံထောင်ချောက်တွေထဲကို မင်း ဆက်တိုးမှာပဲ။
မုဆိုးထောင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်တွေကတော့ လုံးဝကို လွတ်လမ်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတာက အမြင်၊ အကြား၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ဆိုတဲ့ ထောင်ချောက်တွေကနေ လွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဟောဒီက ဗုဒ္ဓက နည်းပေးထားတယ်။ အဲဒါ စောစောက မင်း ကြိုးစားလိုက်တဲ့ တရားအားထုတ်တာပဲ။
နောက်ဆင်တူတဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခု ပြောပြမယ်။ တံငါသည်တစ်ယောက်ဟာ ငါးမျှားချိတ်ကို ရေထဲ ချထားတယ်။ ငါးက အစာကို မက်မောပြီး လာဟပ်တယ်။ သူ့လျှာ(အာခံတွင်း)မှာ ငါးမျှားချိတ်က လာချိတ်မိတယ်။ သူ ဘယ်လိုပဲရုန်းရုန်း မလွတ်နိုင်ဘူး။ အာခံတွင်းက
နာကျင်မှုကလည်း ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေ ပေးနေတယ်။ သွေးစတွေတောင် ပေကျံလို့။ သူက အနာခံပြီး ရုန်းလိုက်ရင် သူ့လျှာ သို့မဟုတ် ခံတွင်းက စုတ်ပြဲသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ လွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ မင်းဟာ ဆေးကို စွဲမိသွားပြီ။ ငါးမျှားချိတ်က ငါးခံတွင်းထဲ ရောက်နေသလိုပဲ။ မင်း ဘယ်လိုမှ ထုတ်လို့ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်း ပေတေပြီး တရားအားထုတ်လိုက်ရင် ငါးခံတွင်း စုတ်ပြဲသွားလို့ နာကျင်သလို မင်းလည်း နာကျင်ရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မင်း ဆေးပြတ်နိုင်တယ်။ ငါးမျှားချိတ်ကလည်း မင်းပါးစပ်ထဲရောက်နေပြီ၊ လွတ်ကလည်း လွတ်ချင်တယ်၊ အသက်မသေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ခံတွင်းနာတာလောက်ကိုတော့ ထည့်မတွက်သင့်တော့ဘူးပေါ့။
နောက် ငါးမျှားချိတ်ကို လာဟပ်မိတဲ့ ဖားလိုတော့ မင်းကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဖားက ငါးမျှားချိတ်ကို ဟပ်လိုက်ရင် သူ့ဗိုက်ထဲထိ မြိုချပစ်တာတဲ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ငါးမျှားချိတ် မြိုချမိတဲ့ ဖားဟာ ငါးလောက်တောင် အခွင့်အရေး မရှိဘူး။ သူ့အတွက်ကတော့ ဘယ်လောက်အနာခံရုန်းရုန်း သေဖို့ တစ်လမ်းပဲ ရှိတော့တယ်။ အဲဒီတော့ ငါက မင်းကို ငါးမျှားချိတ် မြိုချမိတဲ့ ဖားတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဖားလား၊ ငါးလားဆိုတာတော့ မင်း အသိဆုံး ဖြစ်မှာပဲ။
သူ့မျက်နှာအရတော့ စိတ်ဝင်စားသည့်အမူအရာ ပြနေတယ်။ သူ့ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားနေပုံပြတာက ဘေးနားက အိန္ဒိယဒကာမကြီး။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်လို့လည်း ပြောနေတယ်။ ဆေးစွဲနေသူ ဒကာကတော့ နောက်တစ်ပတ်လည်း သူ လာဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တကယ်လာမလာတော့ မပြောတတ်။ သူ့ကို ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ့်ပါးကို ကိုယ်ပြန်စမ်းမိတယ်။ ငါးမျှားချိတ်ဒဏ်တွေများ ရှိနေမလားပေါ့။ မှန်ပြတင်းကနေ အပြင်ဘက်ကို စောင်းငဲ့ကြည့်မိတယ်။ ငါးမျှားချိတ်တွေ ဝဲကာလွင့်ကာ ပြေးလွှားနေကြတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါးမျှားချိတ်ဆိုတာ သူ့သဘာဝအရ နာကျင်မှုပေးတတ်ပေမဲ့ ကိုယ်သွားဟပ်မှ ချိတ်မိတာပါ။ မတော်တဆ ဟပ်မိခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်တိုင်က ငါးဖြစ်တာထက် ဖားမဖြစ်ဖို့တော့ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။
အင်း ….. ဖားလား …. ငါးလား …. ။ ။
Posted by ashin kusalasami at 10:12 AM No comments:
Posted by ashin kusalasami at 8:17 AM No comments:
အညတြ ခရီးသည် (နိဂုံး)
ထင်းရှူးအသီး( အသီးဟု ထင်သည်၊ အထွတ်အထွတ်လေးတွေနဲ့ ခပ်ပွပွအသီး)များက နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေသည်။ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း ထင်းရှူးသီးများကို ရှောင်လို့မရ။ မြေသားစစ်စစ်ကို သိပ်မတွေ့ရ။ ထင်းရှူးသီးများ၊ အရွက်များဖြင့် နူးညံ့နေသောမြေပြင်ပေါ်တွင်သာ လျှောက်လှမ်းနေရသည်။
ကျောင်းဝန်းအတွင်း လှည့်လည်လမ်းလျှောက်နေရင်း ဂျာမန်ရဟန်းတော်က တပည့်တော် အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ အရှင်ဘုရား သဘောမတူတာရှိရင် ဆွမ်းခံသွားရင်း ပြောကြမယ်။ ဒီနေ့ ဆွမ်းခံရွာက တစ်နာရီကျော်လောက် လှမ်းလျှောက်ရမယ်။ အသွားအပြန်ဆိုရင် ၃ နာရီလောက်ကြာမယ်။ အခုတော့ အရှင်ဘုရား ကျောင်းလေးမှာ ခဏသွားနားလိုက်ပါဦး။ ၉ နာရီထိုးရင် ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာ တွေ့ကြမယ်ဟု ပြောပြီး လူစုခွဲလိုက်သည်။ တိတ်ဆိတ်နေသောတစ်ပါးကျောင်းလေးတွင် တရားထိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်ကြည့်သည်။ မရ။ ဘယ်လိုမှ အာရုံစုစည်းလို့ မရ။
အကြောင်းရှာကြည့်သောအခါ စာရေးချင်သောအတွေးက များနေသည်။ ကိုယ်တွေးမိသောအရာများကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေချင်နေသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ပြူတာမပါခဲ့။ ဖုန်းလိုင်းများကိုတောင် ဖြတ်ထားသည်။ မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲ ကောက်ခြစ်နေခဲ့သည်။ အာရုံအထူးစူးစိုက်နေစရာမလိုသော အရွတ်အဖတ်ကိစ္စကို လုပ်လိုက်သည်။ ထင်းရှူးပင်များ ထိပ်ကို တိုးတိုက်သွားသော လေက တဝေါဝေါအသံကို ပေးလျှက်ရှိသည်။
၉ နာရီ ထိုးခါနီးတော့ အဓိကကျောင်းဆောင်ကို သပိတ်လွယ်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ အထဲက ဆွယ်တာက ၂ ထပ်ဖြစ်နေသဖြင့် သင်္ကန်းရုံရတာ မသေမသပ် ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သပိတ်ကို ညာဖက်ပုခုံးတွင် လွယ်သည်။ သူကတော့ ဘယ်ဖက်ပုခုံးပေါ်ကနေ စလွယ်သိုင်းပြီး လွယ်သည်။ တပည့်တော် အဲ့ဒီလို မလွယ်တတ်ဘူးဆိုတော့ ကြိုက်သလို လွယ်ပါ။ ရွာကို ရောက်ရင် တပည့်တော်လည်း အရှင်ဘုရားလို လွယ်မှာပါဟုဆိုသဖြင့် မြန်မာလိုပဲ လွယ်လိုက်သည်။
လမ်းတစ်လျှောက်လုံးက ထင်းရှူးတောကြီးဖြစ်သည်။ ဒီတောထဲမှာ ယုန်တွေ၊ သမင်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က လူသံကြားရင် ရှောင်နေတတ်တော့ တွေ့တော့ တွေ့ခဲတယ်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် တစ်နေရာတွင် ယုန်လေး ၃ ကောင် မြက်စားနေတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်သည်။ ၂ ကောင်က အမြန်ပြေးသည်။ ၁ ကောင်ကတော့ ခေါင်းထောင်ပြီး ကြည့်နေသည်။ ကင်မရာကို အမြန်ထုတ်ပြီး ရိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရာသီဥတုက အေးလို့လား မသိ။ လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ အရသာရှိလှသည်။ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်ဖြတ်လိုက်၊ တောလမ်းလေးတွေပေါ်ရောက်လိုက် သွားနေရသည်။ မြက်ခင်းပြင်ဟုဆိုသော်လည်း ပန်းတွေ တဝင်းဝင်းပွင့်နေတာ များသည်။ အရှင်ဘုရား ဒီပန်းပင်လေးတွေက တမင်စိုက်ထားတာလားဟု မေးသည့်အခါ ဂျာမန်ရဟန်းတော်က ရယ်သည်။ သဘာဝပေါက်နေတဲ့အပင်တွေဟု ဆိုသည်။ အော် … တို့နိုင်ငံမှာတော့ သဘာဝပေါက်တာဆိုလို့ မြက်နဲ့ဆူးတွေပဲ ရှိတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ ပန်းတွေက အလေ့ကျပေါက်သတဲ့၊ ကောင်းလိုက်တာဟု စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်မိသည်။
ဤသို့လျှောက်လာကြရင်း ရွာလေးကို အဝေးမှ လှမ်းမြင်နေရသည်။ ရွာကိုဝင်သည့် လမ်းမပေါ် ရောက်လာသည်။
ရွာအဝင်ကတ္တရာလမ်းက မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်လမ်းမလောက်တော့ ညက်ညောသည်။ ရွာထဲတွင်လည်း လမ်းတွေက အလွန်ညက်ညောလှသည်။ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတွင် ကားများ၊ အလှစိုက်ပန်းအိုးများကို တွေ့နေရသည်။ အရှင်ဘုရား ဒီရွာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်နှအိမ်ရှိလဲဟု ဂျာမန်ရဟန်းတော်ကို မေးမိသည်။ သူက ပြုံးရယ်ပြီး တစ်အိမ်မှ မရှိဘူးဟု ဖြေသည်။ အံ့သြသွားသည်။ ထူးဆန်းတာတွေချည်း ကြုံနေရသည်။
အိမ် ၄ အိမ်သို့ ကြွရသည်။ သူတို့က ခင်မင်မှုနဲ့ လှူကြတာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သိလို့ရယ် မဟုတ်ဘူး၊ အလှူလုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ သူတို့ ဘာသာမှာလည်း ရှိတာပဲ မဟုတ်လား။ တပည့်တော်တို့က အခုလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးဘဲ တောထဲမှာ နေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နေနေတာ၊ တရားအားထုတ်နည်းတွေ ပြောပြတာကို သူတို့က သဘောကျတယ်။ အားပေးတယ်။ စသည်ဖြင့် သူက ရှင်းပြနေသည်။
စာရေးသူက တောရွာက လူများကို လေ့လာနေမိသည်။ မြို့မှာတွေ့ရသောသူများထက် ပိုမိုရိုးသားသည်ဟု ထင်မိသည်။ ဒူးခေါင်းတွေ၊ လက်တွေ၊ အဝတ်တွေမှာ မြေကြီးအနည်းငယ် ပေကျံနေသည်။ ပုဆိန်၊ ဓား စသည့် တောပစ္စည်းများ ကိုင်ဆောင်ထားသော လူဖြူတောသားကို အခုမှ တွေ့ဖူးခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အနည်းငယ် ထူးဆန်းသည်။ နောက်ပြီး တစ်ဦး(ဓာတ်ပုံထဲက ဆွမ်းလောင်းနေသူ)ကဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂျာမန်သူနှင့်လက်ထပ်ပြီး တောမှာ ယာလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ စိတ္တဇဆန်ဆန်နိုင်ငံခြားကားများ ကြည့်ဖူးသဖြင့် ပုဆိန်ကြီးကိုင်ထားသော အင်္ဂလိပ်တောသားကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်လိုက်သေးသည်။
ဂျာမန်ရဟန်းတော်က မိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် စာရေးသူကို အခုမှ ဥရောပရောက်လာသူဟု ဆိုကာ သူတို့ အိမ် အတွင်းပိုင်းများကို ဗဟုသုတအဖြစ် လိုက်ပြပေးသည်။ အပူပေးစက်များ၊ အခြားလူမှုအသုံးအဆောင်များ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုများကတော့ ချီးကျူးစရာ ကောင်းလှသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
သွားခဲ့သမျှ အိမ် ၄ အိမ်ကရော၊ အခြားလမ်းတွေ့သူများကပါ ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေစွာ နှုတ်ဆက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အခြားလမ်းမှနေ၍ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ တောထဲတွင် လင့်စင်အချို့ကိုလည်း ကြိုကြားကြိုကြား တွေ့ရသည်။ သမင်၊ ယုန် စသည့်သတ္တဝါလေးကို ပစ်ဖို့ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လိုင်စင်ရှိသူများ ပစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသေးသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလို အားလုံး ဘေးမဲ့ပေးထားလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟု တွေးမိသည်။
၁၁ နာရီကျော်လောက်ရှိသောအခါ ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကြသည်။ ငယ်သူက ကြီးသူကို ရှိခိုးကြသည်။ ဆွမ်းခံရာမှ ရရှိလာသော ပေါင်မုန့်များ၊ အချိုရည်ဗူးများ၊ သစ်သီးများကို ဆွမ်းကျောင်းထဲ ပို့လိုက်သည်။ ကဲ အရှင်ဘုရား ဘယ်လို သဘောရလဲ၊ ဆွမ်းခံကြွတာကိုလေ၊ မောသွားပြီလားဟု မေးသည်။ မမောပါဘူးဘုရား၊ လမ်းလျှောက်ရတာ ကောင်းပါတယ်။ တပည့်တော်အတွက် အတွေ့အကြုံသစ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲလည်း တစ်မျိုးခံစားရပါတယ်ဟု ပြန်ဖြေမိသည်။
လုပ်ပါဦး၊ အရှင်ဘုရား ခံစားချက်ကို ..ဟု ဆိုသောအခါ ဒီလိုပါဘုရား … အခု အရှင်ဘုရားတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေ လှူဒါန်းတဲ့ ဆွမ်းအစရှိတာနဲ့ ရပ်တည်နေကြတာဆိုတော့ တပည့်တော် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကအကြောင်းတွေကို သတိရမိလို့ပါ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေရဲ့ဆွမ်းနဲ့ ရပ်တည်ရတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေရဲ့အိမ်မှာ ဆွမ်းခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး မဟုတ်လား။ တချို့ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ၁၂ နှစ်လုံးလုံး အိမ်ရှေ့မှာ ဆွမ်းသွားရပ်တာ ဘာဆွမ်းမှ မလောင်းဘူး။ ၁၂ နှစ်ပြည့်မှ ကန်တော့ဆွမ်းပါဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြန်ပြောဖော်ရသတဲ့။ ဒါတွေကို တပည့်တော် ပြန်သတိရတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို လူတွေ သိမြင်ခွင့်ရဖို့အတွက် ကျောင်းမှာ တရားကျင့်ပြီး ရောက်တဲ့နေရာမှာ ဆွမ်းခံနေရုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိအမြင်ကတော့ တပည့်တော်ဘဝအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲဘုရားဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်။
ဂျာမန်ရဟန်းတော်က ဆက်ပြောသည်။ ဟုတ်တယ်။ အခု ဒီကျောင်းမှာ လာရောက်ကူညီသူတွေ၊ တရားလာထိုင်သူတွေကလည်း ခရစ်ယာန်တွေပဲ။ အချို့တရားထိုင်တာ တော်တော်အရသာ တွေ့နေကြပြီ။ တပည့်တော်တို့က မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းပါလို့ လုံးဝ မပြောဘူး။ အချို့လည်း ဒီအတိုင်း နေတယ်။
အချို့တော့လည်း သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းချင်ကြောင်း လာပြောကြတယ်။ မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းချင်တာ ငါနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ မင်း စိတ်နဲ့မင်းပဲ ဆိုင်တယ်။ မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းကို ငါ ဘယ်လိုလုပ် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ (Converting is nothing to do with me. You are the only one who knows your mind really. How can I jugde you are Buddhist or not?)
မင်းစိတ်က ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာအပေါ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ရှိသွားပြီဆိုရင် မင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတောင် ဖြစ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ ဘုရားက ပျော်နေမယ်၊ ငါတို့က ဝမ်းသာနေမယ်ထင်လား။ မင်း အမြင်မှန်သွားတဲ့အတွက်ပဲ ငါတို့ ဝမ်းသာတယ်။ မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တော့ ငါ နည်းနည်းမှ စိတ်မလှုပ်ရှားဘူး၊ ငါတို့တွေဟာ လူတစ်ယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာရုံနဲ့တော့ ဝမ်းမသာနိုင်ဘူး။ လူတစ်ယောက် အသိအမြင်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို ဝမ်းသာပါတယ်။
တကယ်တော့ ငါတို့ဟာ Convert ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးကို မသုံးချင်တာ၊ Realization ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ သုံးချင်တာလို့ သူတို့ကို ပြောလိုက်တယ် … စသည်ဖြင့် အားတက်သရော ပြောနေခဲ့သည်။
ဒါနဲ့ နေပါဦး၊ အရှင်ဘုရားက တပည့်တော်ကိုပဲ မေးခွန်းတွေ မေးနေတယ်၊ အရှင်ဘုရားမှာကော ဘာအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေ ရှိလဲဟု ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့် မေးလေသည်။ အရှင်ဘုရားက အနာဂတ်အကြောင်း၊ ဘုရားယုံခြင်းအကြောင်းတွေကို အကျယ်ချဲ့ပြောသွားကတည်းက အရှင်ဘုရား ပြောတာတွေကို သဘောကျပြီး ကိုယ့်အနေအထားကို တော်တော်လေး ပြန်သုံးသပ်မိတယ်။ အချိန်မရွေး သေနိုင်တာကို သိပေမဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။ အခု တပည့်တော်တို့နိုင်ငံက ပညာရေးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အတော်လိုအပ်နေတယ်။ လူပညာရေးတော့ လူတွေအပိုင်းပေါ့။ ဘုန်းကြီးပညာရေးကို ပြင်စေချင်တယ်။ သူများကို ပြင်လို့ မရရင် ကိုယ်ပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုလောက် တည်ထောင်ပြီး စံပြပညာရေးစနစ်တစ်ခုကို အသက်သွင်းချင်တယ်။
အရှင်ဘုရားနဲ့ စကားမပြောခင်တုန်းကတော့ ဒါတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် လူတွေကို ဘယ်လို၊ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘယ်လို စည်းရုံးမယ် စသဖြင့် တပည့်တော် စီမံကိန်းတွေ ဆွဲဖို့ စိတ်ကူးထားခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဒီစီမံကိန်းတွေကို ဘုရားကိုပဲ လွှဲအပ်လိုက်တော့မလားလို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အပ်မှာလဲဆိုတော့ တပည့်တော်က ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကိုပဲ လုပ်မယ်။ ကျန်တာတွေတော့ ဘုရားက လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့။ ဒါက တင်စားပြီး ပြောတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားက တန်ခိုးရှင်လို လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး … စသဖြင့် ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့သည်။
မှန်ကန်စွာ၊ ရိုးသားစွာ၊ တက်ကြွစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာ၊ ယုံကြည်စွာ လုပ်ဆောင်နေမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်သွားရာလမ်းဟာ အေးချမ်းသော၊ နေပျော်သော၊ ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်သော နေရာတစ်ခုဆီ မလွဲမသွေ ရောက်ရှိနိုင်မှာ သေချာနေသည်ဟု ယုံကြည်ချက်အခိုင်အမာ ဖွဲ့တည်နေမိခဲ့သည်။ အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ကျော်ကြားမှု၊ အောင်မြင်မှုအတွက် လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ မိမိအောင်မြင်မှုအတွက် အူယားဖားယား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မရိုးမသားနည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နေသူများသည် ဗုဒ္ဓသားတော်မပြောနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ပင် မဟုတ်နိုင်တော့ပါလားဆိုသည်ကိုလည်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာနေမိခဲ့သည်။
ခရီးသွားသဖြင့် ရရှိလာသောအသိအမြင်များတွင် လွတ်မြောက်ပြီးသော နှလုံးသား(Liberated Heart)ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော မုတ္တောဒါယ(Muttodaya)တောကျောင်းသို့ သွားရောက်ရခြင်းကြောင့် ရရှိလာခဲ့သည့် အသိအမြင်များက တစ်မျိုးတစ်ဖုံ အံ့သြစေခဲ့ပါသည်။ ဘဝအသိအမြင်များကို တလင်းလင်းတလက်လက် ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ လွတ်မြောက်ပြီးသော နှလုံးသားရှိရာသို့ကား ရောက်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ကိုယ့်နှလုံးသားကတော့ လွတ်မြောက်ဖို့ အချိန်နာရီများ ဘယ်မျှလောက် ယူရဦးမည်မသိပါတကား။
မှန်ကန်စွာ၊ ရိုးသားစွာ၊ တက်ကြွစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာ၊ ယုံကြည်စွာဖြင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တော့ အားအင်တွေက ပြည့်ပြည့်လာသည်ဟု ခံစားမိသည်။
စာရေးသူ၏ အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ခံစား၍ ရသမျှလေးများကို မှတ်တမ်းပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သုံးသပ်ချက်များမှာ သိလွန်းတတ်လွန်း၍ သုံးသပ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြင်လိုက်သောမြင်ကွင်းအပေါ်မှာ ခံစားလိုက်ရသော လျှပ်တပြက်အတွေးစလေးများကို ရေးခြစ်မိခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာ ဆိုချင်ပါသည်။ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးချက်များလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ပိုင်းမှ ခေါင်းစဉ်သီးသန့်ဖြင့် တင်ပြဖို့ စိတ်ကူးထားပါသည်။
အပြန်ခရီးတွင် ရထားတံခါးကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ဖွင့်တတ်သွားပြီ။ အသွားတုန်းကလို ဟိုလိုက်မှတ်၊ ဒီလိုက်ကြည့် သိပ်လုပ်စရာ မလိုတော့။ အတွေ့အကြုံက လူကို တည်ငြိမ်စေသည်။ မုတ္တောဒါယတွင် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ အခု စာဖတ်ပရိသတ်များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မုတ္တောဒါယ(Liberated Heart) လွတ်မြောက်ပြီးသော နှလုံးသားပိုင်ရှင်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by lwin at 7:01 PM No comments:
အညတြ ခရီးသည် (၃)
ည ၉ နာရီခန့်တွင် ကျောင်းဝင်းထဲ လျှောက်ကြည့်သည်။ Youtube ထဲမှ ဗွီဒီယိုကလစ်လေးထဲတွင် တွေ့ဖူးထားသော ဆင်းတုတော်လေးကို ဖူးရသည်။ ကျောင်းဝင်းအနှံ့တွင် အဖြူ၊ အဝါ၊ အနီ၊ ခရမ်းရောင် ပန်းများ ပွင့်လန်းနေကြသည်။ သဘာဝပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုလို သာယာလှသည်။
စာကြည့်တိုက်၊ ဘုရားခန်းများကိုလည်း လှည့်ကြည့်သည်။ စာကြည့်တိုက်တွင် တို့နိုင်ငံက ဆရာတော်ကြီးများ ရေးထားသောစာအုပ်များ တွေ့မလား လိုက်ကြည့်မိသည်။ ဆရာကြီးဦးဘခင် တရားထိုင်နည်းစာအုပ်တစ်အုပ်သာ တွေ့မိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆရာတော်များ ရေးထားသော ဘာသာပြန်စာအုပ်များသာ အများဆုံး တွေ့ရသည်။
အနောက်တိုင်းသားများ ရေးထားသော ဓမ္မစာအုပ်များမှာလည်း များသောအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရဟန်းတော်များဖြစ်သော အာဂျန်ချား စသော ရဟန်းတော်များ၏ တပည့်များ ရေးထားသောစာအုပ်များသာ ဖြစ်လေသည်။ အနောက်တိုင်းတွင် တည်ထောင်ထားသော ထိုင်းတောရဂိုဏ်းအဆက်အနွယ်ကျောင်းများစာရင်းကိုလည်း ကြည့်မိသည်။ အားကျစရာကောင်းလိုက်ပါဘိ။
အဓိကအဆောင်ရှေ့တွင် ဘူတာကို လာကြိုသည့် ရဟန်းတော်ကို တွေ့ရသည်။ စောစောက သူလာသေးကြောင်း၊ (ပဋ္ဌာန်း)ရွတ်ဖတ်နေသံကြားလို့ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ချောကလက်နှင့်ပျားရည် လာပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး မနက် ၆ နာရီ စုပေါင်းဘုရားရှိခိုး၊ တရားထိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၇ နာရီတွင် မနက်စာစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကာ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွါသွားသည်။
မနက် ၅ နာရီကတည်းက နိုးနေသည်။ ကျောင်းက ယူလာခဲ့သော သပိတ်၊ သောက်ရေခွက်၊ ဇွန်း၊ နိသီဒိုင်၊ လက်သုပ်ပဝါ စသည်တို့ကို ပြင်ပြီး အဓိကအဆောင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အကြီးဆုံးရဟန်းတော်ကို ဘုရားခန်းတွင် တွေ့ရသည်။ သူက ၂၅ ဝါရှိပြီဟု ဆိုသဖြင့် ရိုသေစွာ ဝတ်ပြုလိုက်သည်။ စာရေးသူဟာ ဂျာမနီရောက်တာ မကြာသေးကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအသောက် အစစအရာရာ အသစ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ မြန်မာနှင့် ကွဲပြားကြောင်း၊ အခု တောရကျောင်းကို လာလိုက်ရသည့်အခါ ပိုပြီး အသစ်ဖြစ်နေသည်ဟု ခံစားရကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အာရှစံတန်ဖိုးများကို ကျင့်သုံးနေသော အနောက်တိုင်းသားနေထိုင်သည့် တောရကျောင်းဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမြင်မတော်သည်များ ပြုလုပ်မိပါက ညီငယ်တစ်ယောက်လို ဆုံးမပြောဆိုနိုင်ပါကြောင်း လျှောက်လိုက်သည်။
သူတွေ့ဖူးသော မြန်မာကိုယ်တော်များတွင် စာရေးသူက ထူးခြားကြောင်း၊ စာရေးသူပြောသော အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်း နားလည်လွယ်ကြောင်း၊ တက်ကြွပွင့်လင်းသည့်ပြောကြားချက်ကြောင့် သူလည်း ဝမ်းသာပါကြောင်း (အနောက်တိုင်းသားတွေ ထုံးစံအတိုင်း စာရေးသူ ဝမ်းသာအောင်) ပြောပြလေသည်။
သူတို့သည် တစ်နေ့တစ်နေ့ကို ဘုရားကို အလွန်ရှိခိုးကြသည်။ မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် ဘုရားကို ရှိခိုးသည်။ ပြီးလျှင် သူတို့ကို ရဟန်းပြုပေးသော၊ တရားပြပေးသော ထိုင်းရဟန်းတော်များပုံကို ရှိခိုးသည်။ ပြီးလျှင် ငယ်သည့်ကိုယ်တော်က ကြီးသည့်ကိုယ်တော်ကို တွေ့တိုင်း ရှိခိုးသည်။ လမ်းတွင် ရှိခိုးသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ မနက်ဘုရားရှိခိုးချိန်တွင်၊ နံနက်စာ မစားမီအချိန်၊ နံနက်စာစားပြီးအချိန်၊ ဆွမ်းခံမသွားမီ၊ ပြန်လာလျှင်၊ နေ့ဆွမ်းစားလျှင် မစားမီ၊ စားပြီး၊ ညနေ ဘုရားဝတ်ပြုလျှင် မပြုမီ၊ ပြုပြီး အငယ်ရဟန်းတော်က ကြီးသူကို ရှိခိုးသည်ကို တွေ့ရသည်။ နံနက်စာဘုဉ်းပေးပြီးသောအခါ ကျောင်းဝန်းအနှံ့ လျှောက်ကြည့်ကြသည်။ ၁၅ ဧကခန့် ကျယ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
လမ်းလျှောက်ရင်းနှင့် အကြီးဆုံးရဟန်းတော်ကို အရှင်ဘုရား အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲဟု မေးမိသည်။
ဘာ ဘယ်လို ဆိုပြီး ထူးဆန်းသလို ပြန်ကြည့်သည်။
တင်ပါ … ဒီလိုပါ အရှင်ဘုရားရဲ့ အနာဂတ်စီမံကိန်းက ဘယ်လို ရှိလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါဟု ပြောလိုက်သည်။
အော် … အနာဂတ်လား။ တပည့်တော်မှာ အနာဂတ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စီမံကိန်းဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ တပည့်တော်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ပဲ ရှိပါတယ်ဟု ဆိုလေသည်။ နားထဲမှာ ကြားရသည်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်။
အော် ဒါဆိုရင် သာသနာတော်ပြန့်ပွားဖို့အတွက် အရှင်ဘုရားမှာ ဘာစီမံကိန်းမှ မရှိဘူးလားဟု မေးကြည့်မိသည်။ အမှန်အားဖြင့် စပ်စုချင်လွန်းလို့သာ မေးရသည်။ သူက ထိုကိစ္စကို သိပ်ပြောလိုဟန် မရှိလှပေ။
ကိုယ့်ဘာသာပြန့်ပွားဖို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်သလို တိုးချဲ့တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို တပည့်တော် အယုံအကြည် မရှိဘူး။ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေတော့ မပြောလိုဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားရေးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာပဲ တိုးချဲ့ရတာ။ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အငြိမ်းဓာတ်တွေ ရောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် စီမံကိန်းမလိုဘူး။ စီမံကိန်းတစ်ခုခုပါလာရင် စီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်လို စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေ ဝင်လာမယ် …. သူက လမ်းလျှောက်ရင်း တရစပ် ပြောနေသည်။
မနက်ခင်းအအေးဓာတ်က အသားကို စိမ့်စိမ့်သွားစေသည်။ သို့ရာတွင် သူ့စကားများကြောင့် ရင်ထဲမှာ နွေးနေသည်ဟု ခံစားရသည်။
သူက ဆက်ပြောသည်။ အရှင်ဘုရားကို တပည့်တော် မေးကြည့်ပါရစေ။ တပည့်တော်တို့ ဘုရားရှင်ဟာ နောက် ဘယ်နှနှစ်ကြာရင် ကောသလတိုင်းတစ်ခုလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်၊ နောက် ဘယ်နှနှစ်ကြာရင် ငါဘုရားသာသနာ ယုံကြည်သူ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိရမယ်၊ နောက် ဘယ်နှနှစ်ကြာရင် အိန္ဒိယသူဌေး ဘယ်နှဦးဟာ ငါဘုရားသာသနာကို ကိုးကွယ်လာစေရမယ် … စတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလားဟု မေးလေသည်။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ဟု ဖြေလိုက်သည်။
တပည့်တော်ကတော့ ဘုရားကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခုပဲ ထားတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ တပည့်တော်တို့ဟာ ဘုရားခိုင်းတာကို လုပ်တယ်။ ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံး နေတယ်။ ဗုဒ္ဓနှစ်သက်တဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာအောင် မကြိုးစားဘူး။ အဲဒီလို မကြိုးစားလို့ပဲ အခု ဒီနယ်မှာကော အခြားဥရောပက တောရကျောင်းဝန်းကျင်တွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာကြတာလို့ ယုံကြည်တယ်။
လူတိုင်းနဲ့ဘာသာတိုင်းနဲ့ ပြဿနာမတက်တာဟာလည်း တပည့်တော်တို့က ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝပုံစံကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖော်ပြနေလို့ပဲ။
တပည့်တော်တို့ ပြောပြောနေတဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာက ဘုရားကို ယုံကြည်ပြီး သူ လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်း လုပ်ရုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတစ်ခုပဲလို့ ထင်တယ်။
ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းသာ လုပ်၊ သာသနာလည်း ပြန့်ပွားတာတို့၊ ကျောင်းတိုက် တိုးတက်စည်ပင်တာတို့ စတာတွေက အလိုလို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို တပည့်တော် လုံးဝ ယုံကြည်တယ်။
ဗုဒ္ဓက နယ်တကာလှည့်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေများလာအောင် စည်းရုံးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူသိထားတာကို သူများကို သိစေချင်လို့၊ သူ အေးချမ်းတာကို သူများတွေလည်း အေးချမ်းစေချင်လို့ လျှောက်သွားပြီး လိုက်ပြောပြတာ၊ အေးချမ်းတဲ့ သူရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လိုက်ပြတာ၊ တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝနေနည်းကို ကပွဲတွေ လိုက်ကျင်းပသလို နယ်လှည့်ပြီး ပြတာ။
အခုလည်း တပည့်တော်တို့ ဆရာ(ထိုင်းက တောရဂိုဏ်းက)ကလည်း အဲဒီလို ယူဆထားတဲ့အတွက် သူ့တပည့်မှန်သမျှကို အရှင်ဘုရားတို့တွေ သာသနာပြန့်ပွားဖို့ ဘာသန္တရတွေ မလိုပါဘူး။ ခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာနေစရာ မလိုဘူး။
သာသနာပြန့်ပွားဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် အရှင်ဘုရားတို့မှာ လုပ်စရာအလုပ်က တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ ဘုရားစကားနဲ့အညီ တရားကျင့်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကို စံနမူနာအဖြစ် ပြနိုင်ဖို့ပဲတဲ့။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ ဂန္ထဓုရနဲ့ဝိပဿနာဓုရပဲ ရှိတယ်။
ဂန္ထဓုရမှာ အင်္ဂလိပ်စာစသည်၊ အခြားယဉ်ကျေးမှုစသည်တွေ မပါဘူး။ သာသနာပြန့်ပွားစေချင်ရင် ဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့ အကျင့်နဲ့ ဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ စကားတွေကို သိအောင်လုပ်ရုံပဲ။ တစ်နည်းပြောရရင် ပိဋကတ်ပဲ။
အရှင်ဘုရား လက်ခံလား၊ လက်မခံလား မသိဘူး။ တပည့်တော်တို့က အဲ့ဒီလို လက်ခံပြီး တရားပဲ ကျင့်တယ်။ သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ တရားဟောတယ်။ တရားပြတယ်။ ဒါပဲ။ ဟော … ဟိုမှာ ယုန်လေး ၂ ကောင်။ လက်ညှိုးညွှန်ပြနေစဉ်မှာပဲ ယုန်လေးများက ပြေးထွက်သွားကြသည်။
မထင်မှတ်ထားသော စကားလေးများကို ကြားရသည့်အတွက် အသိအမြင်မျိုးစုံ၊ ခံစားချက်မျိုးစုံက ရင်ထဲတွင် စီးဆင်းလာနေခဲ့သည်။
“သာသနာပြန့်ပွားဖို့အတွက် ဘုရားလမ်းညွှန်တာကို လုပ်ဖို့ပဲ။ ဘာတွေမှ ထပ်သင်စရာ မလိုဘူး”။
“အရှင်ဘုရား ဘုရားကို မယုံဘူးလား”။
“အောင်မြင်မှုဆိုတာက ဘုရားကို ယုံကြည်ပြီး သူ လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်း လုပ်ရုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတစ်ခုပဲလို့ ထင်တယ်”။
သူပြောခဲ့သောစကားလုံးများက ဦးနှောက်ထဲ စီးဝင်လိုက်၊ နှလုံးသားကို လာထိခတ်လိုက်။ ထူးဆန်းသလိုလို၊ ဝမ်းသာသလိုလို၊ တစ်စုံတစ်ရာကို သိမြင်သဘောပေါက်သွားသလိုလို ခံစားနေမိခဲ့သည်။
“ငါတို့တွေ ဘုရားကို တကယ်များ မယုံခဲ့ကြဘူးလား”ဟုလည်း တွေးဖြစ်သွားသည်။
ကျောင်းတိုက်၊ ငွေကြေး စသည်များ ပိုင်ဆိုင်ရရေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေး၊ ကျောင်းတိုက်ရှိလျှင်လည်း ကျောင်းတိုက်ချမ်းသာကြီးပွားရေး စသည်တို့အတွက် (ဂန္ထဓုရ၊ ဝိပဿနာဓုရမှ အခြားဖြစ်သော) လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေမှုများ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအတွက် တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်မှုများ၊ …. စသည် စသည်တို့သည် ဘုရားကို မယုံကြည်သဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်ရပ်များဟု သဘောပိုက်လာမိသည်။
“ဘုရားကို ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားလမ်းညွှန်သောတရားဓမ္မကို ယုံကြည်လာမည်။ ဘုရားလမ်းညွှန်သောတရားဓမ္မသည် အရာရာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည် (ဓမ္မော ဟဝေ ရက္ခတိ ဓမ္မစာရီံ”။
ချိုးငှက်လေးတွေက အုပ်လိုက်သင်းလိုက် ပျံသွားကြသည်။ ထင်းရှူးပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ရောက်သောအခါ သံပြိုင်တကူးကူး အော်မြည်နေကြလေသည်။ ချိုးငှက်လေးများ၊ အမည်မသိသောအခြားငှက်လေးများ၏ တေးသီဆိုမှုလေးများနှင့်အတူ ရင်ထဲတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ဝါကျများကလည်း တေးသီချင်းများလို လွင့်ဝဲလာနေခဲ့သည်ကို သတိပြုမိသည်။
ရဟန်းတစ်ပါးအနေဖြင့် ရာထူးနေရာ မရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ရာထူးနေရာမှ ပြုတ်မှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဒကာဒကာမများ မပေါများမှာကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ရှိပြီးသော ဒကာဒကာမများ အခြားကျောင်း၊ အခြားကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်သွားမှာကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကျောင်းတစ်ဆောင်မီးတစ်ပြောင်နှင့် မနေနိုင်မှာကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ရှိပြီးသားကျောင်းထိုင်၊ ကျောင်းအုပ် စသည်အဖြစ်မှ ရွေ့လျောသွားမှာ စိုးရိမ်ခြင်း …. စသည်တို့သည် ဘုရားကို မယုံခြင်းကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသောအခါ အနာဂတ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွေးယူထားစရာ မလိုသော၊ တယုတယ သိမ်းဆည်းထားစရာ မလိုသော အမှိုက်တစ်ခုအနေဖြင့် မြင်လာမိသည်။
(ရဟန်းတစ်ပါးအတွက်) အနာဂတ်ဟူသည် ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်မှုနှင့် သူပေးသော ဓမ္မကို လိုက်နာခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါလားဟု သဘောပေါက်လာခဲ့မိသည်။ တစ်သက်တာ လိုက်နာနိုင်မည် မနိုင်မည်ကိုတော့ အာမခံ၍ မရနိုင်သေးသော်လည်း ထိုင်း+ဂျာမန်တောရကျောင်းလေးမှ ရရှိလိုက်သောအသိတရားတစ်ခုကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို အတွေးသစ်များဖြင့် ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်နေစေခဲ့သည်။
Posted by lwin at 1:42 PM No comments: